Healthy Habit – Page 30 – Healthy Life Journal
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— လူတွေ အသက်ရှင်သန်ဖို့ရာအတွက် လေကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ လေမရှိဘဲနဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်ထက် ပိုပြီးမနေနိုင်ပါဘူး။ အဆုတ်ထဲကို ရောက်ရှိတဲ့ လေဟာလည်း သန့်စင်နေဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆုတ်ကျန်းမာနေစေဖို့ ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဟာ ကောင်းမွန်သန့်စင်နေအောင် ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အဘွားဒေါ်သောင်းကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၀၊ ဝါဆိုလဆန်း ၃ ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်၊ စမ်းချောင်းမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း ၁၂ ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “အဘွားရဲ့ တခြားမောင်နှမတွေကတော့ ဆုံးသွားပါပြီ၊ အဘွားတစ်ယောက်ပဲ...
၁၀ မိနစ်အတွင်း သွေးတိုးကျစေမည့် သဘာဝနည်း ၈ သွယ်
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အလွန်အမင်း ခေါင်းကိုက်တာ၊ နုံးချည့်တာ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်တာနဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်တာတွေ ခံစားရရင် သွေးတိုးတာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေက စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ အဝလွန်တာ ဒါမှမဟုတ် အခြေခံရောဂါဝေဒနာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့လူတွေက ဒီလိုဝေဒနာတွေကို...
နောင် ၁၀ နှစ်ကြာချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေးဇူးတင်နေမယ့် အလှအပအကျင့်ကောင်း ၁၀
အလှအပဆိုတာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ချည်း ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့အမူအကျင့်ပေါ်မှာလည်း မူတည်နေပါတယ်။ တချို့က မနက်ခင်းမှာ ရေတစ်ဖန်ခွက် သောက်တဲ့အကျင့်ရှိတတ်ပြီး တချို့ကျတော့ အသားအရေထိန်းနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ဆင့်ကိုတောင် ကျော်မသွားတတ်ပါဘူး။ ဒီအလှအပ နည်းလမ်းတွေကို နေ့စဉ်လုပ်နေတာက အခုမသိသာပေမယ့် နောင် ၁၀ နှစ်ကြာသွားပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။...
———၊ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန် ၊——– Q. အံဆုံးပေါက်နေချိန်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာတချို့က ခံစားရပြီး တချို့က ဘာမှမခံစားရပါဘူး ဆရာ။ နာကျင်မှုဝေဒနာ သက်သာစေဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ Lattlatt (FB) A. အံဆုံးပေါက်ချိန်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာ ခံစားရတာဟာ...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တချို့လူတွေဟာ တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ကိုက်ခဲနာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားနေရပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုက်ခဲနာကျင်တဲ့ ဝေဒနာ သက်သာစေဖို့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲပေးသင့်ပါတယ်။ သဘာဝဆေး (၁) အနားယူခြင်း ကိုယ်တိုင်အတွက် အနားယူဖို့ သီးသန့်အချိန်ပေးပါ။...
အိပ်ရာထဲ အကြာကြီးနေရင်း အဆစ်ခိုင်သွားခြင်း (Joint Contracture)
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အဆစ်ခိုင်တယ်၊ အဆစ်ကွေးတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ဆရာ။ A. အိပ်ရာထဲ အကြာကြီးနေနေရတဲ့ လူနာတွေ၊ အောက်ပိုင်းသေသွားတဲ့ လူနာတွေနဲ့ လေဖြတ်ထားတဲ့ လူနာတွေ . . သူတို့က...
ကျန်းမာအောင်နေထိုင်ခြင်းဖြင့် မကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ပါ
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဆိုတာ ဘယ်လိုရောဂါတွေ ပါဝင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေသာမက မကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေလည်း များနေပါတယ်။ မကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေဆိုတာ သွေးတိုးရောဂါ၊...
နေ့စဉ် အလုပ်တစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
—၊ ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုသလို ကိုယ်လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအကြောင်း သိချင်ပါတယ် ဆရာ။ A. နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကိုယ်လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုခုကို မနားမနေ တာရှည်ပြုလုပ်တာကြောင့်...